Kuni tuffii sabaati. Takkaa diinnii hangana nutufatee hin beeku. - Kichuu
[ August 3, 2020 ] How a musician’s death unleashed violence and death in Ethiopia	Africa
[ August 3, 2020 ] Haacaaluu Hundeessaa Goota gaafa xiiqii	Musics
[ August 3, 2020 ] Saaxilaman! Basaastota Bilxiginnaa	News
[ August 3, 2020 ] This is Ethiopia-Empty Vessel!!	Africa
[ August 3, 2020 ] This is a genocide on Oromo people by Abiy Ahmed’s led government of Ethiopia!	World
[ August 3, 2020 ] Abiy biyya san badii jalaa oolchuuf:	News
[ August 3, 2020 ] Qoqqobbiin Uggura Geejjibaa Qeerroodhaan labsame guyyaa jalqabatti	Africa
[ August 2, 2020 ] His Excellency to the U.N High Commissioner for Refugees, Geneva-Switzerland	Africa
[ August 2, 2020 ] Maqaa Basaastota Bilxiginnaa kannneen Dhokatanii Ummata Basaasaa Jiran.	News
[ August 2, 2020 ] Democracy imperiled in Africa by ‘reformers’ turned dictators	Africa
HomeAfaan OromooNewsKuni tuffii sabaati. Takkaa diinnii hangana nutufatee hin beeku.
Kuni tuffii sabaati. Takkaa diinnii hangana nutufatee hin beeku.
Kuni tuffii sabaati. Takkaa diinnii hangana nutufatee hin beeku. Diina nu tuffate keessaa akka seenaatti kan jiru abbaytsahayyee, dubbii likkii isaan galchina jedhe qofa ture. Hardha garuu DR ABIY AHAMAD tuffii daangaa hin qabneen oromoo kana tuffate.
Garuu immoo innii onnee dhiibnee dubbannu baatii muraasaan booda akka inni badu ni amana.
Walii galteen sadarkaa biyyatti ta’ee kuni gaariidha! Naannoo 9n biyyatti keessaa 8 wal ta’anii karaa har’a jalqabuuf waada walii galuun waan dansaadha.
Sadarkaa naannoti immoo mari’annee karaa irraa deemu qabnu, kan fedhii ummata keenya galmaan ga’uu danda’u tolfachuun waan filannoo biraa hin qabneedha. Kuni kaleessa dhumu qaba ture. Har’dha hin jalqabnu taanan garuu fedhii ummata keenyaf iddoon nuti qabnu mallatoo gaafii guddaa jala galuu qabdi.
Yartuun garaaf galte birhanu lenjisoo gammachuu ofii ibsataa jirti.
Naannoon TIGRAY ijjannoo qabdu garsiisfattee keessaa haftee jirti.
#etv ጠቅላይ ሚንስትር ዶ/ር ዐቢይ አሕመድ የብልፅግና ፓርቲ የፊርማ ስነ-ስርዓት ላይ ያደረጉት ንግግር
የእንቁላሏ ተረት ያራሱን አወዳደቅ የተነበየበት!
የሚሊዮኖችን ድምጽ የማይሰማ ጆሮ 8 ግለሰቦችን ፈረሙልኝ ብሎ 7 አጨብጫቢዎችን ከፊትለፊቱ አቁሞ ያ ተረትን እንጂ ፖሊሲ የማይቀርጽ ጭንቅላቱን አሳምኖ ውድቀቱን ያሳምራል።
ከፈራሚዎቹ ውስጥ የሚያደርገውን የሚያውቀው «…ከላይ ያለውን አረፋ አትመልከቱ፤ አማራ ህገመንግስቱን ሳይቀር እንደሚቀይር ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ስራችን ባቀድነው መሰረት እየሄደ ነው።» ያስባለው ደመቀ መኮንን ብቻ ይመስለኛል።
የተረትና ምሳሌ አባቱ የእንቁላሏ ተረት ያራሱን አወዳደቅ የተነበየበት ሲሆን ፈራሚዎቹም «ተገደን እንጂ አምነንበት አይደለም» የሚሉበት ግዜ ሩቅ አይሆንም!
#Oduu_ECA, #Abiyyi_Ahimeed (inbox)
“Har’a ganama MM Dr Abiyyi Ahimed walgayii waameet ture. Walgayii sanaraatti haasaa inni godhe keessatti waan baayyeetu tuttuqame. Dhugaa fi sobasaa uummanni adda baafata jenneet abdanna. Dubbiiwwan inni irratti xiyyeeffate kaasse keessaa gurguddoo kan ta’an akkatti qocamee. Keessa beektootatu nuu laate. Mee qlleensarra nuf oolchi.
MM marii gara sa’aa 3:30 Akitivistoota, deegartoota isaa, Abbotii qabeenya Oromoo, hayyoota Oromoo Univarsitifi qaama Hawaasa tokko tokkoof godhe keessatti waan sadii irratti kan xiyeefate yoommuu ta’u isaanis dhimma dhuunfaa isaa, OPDO ajjeese sanaafi Oromoo ture jedhama. MM miiraa aariifi sodaa keessa ta’ee akka dubbachaa ture dha.
1. Namni baayyeen Abiyyi saykoloojii Oromoo hin qabu nan jedha. Ani sykoloojii Oromoo osoon qabaadhee injifachuu iyuuu hin danda’u ture.Oromoon waraana gaafa deemu dura dirree irratti marii godha, iccitii hin qabatu. Hojii hin jaalatu.
2. Haatii isaa Amaara na jedhu. Haatii koo Shawaa dha malee Amaara miti. Abbaakoyyuu isheetu waan Oromoo barsiise.
3. Dhimmi Filannoo nan yaadessu, yoo barbaadees ani ilma Malas Zenaawii ta’uu dagatamuu hin qabu.
4. Faransayiifi AMerikaan waaraan siergina dhimma Dimokoraasii jettu kana iyyuu dhiisi najechaa jiru.
5. Kabineen OPDO hundi Abbaa qabeenyaati. Hattuu dha. Kanaafaan ishee diige.
6. Ani qofaa jira. Namni nagargaaru hin jiru. UNDP kadhadheen namoota 80 oliif miindaa USD 5000, 6000,… Kanfala. Jarreen kana keessaa harki 75 Oromoo dha. Gariin asuma sin fuuldura jiru. Garuu hojii hin jaalatan, nurratti odeessaa oolu.
7. Oromoon % 95 nafaana hin jiru.
8. OPDOn dhimma Bilxiginnaa Party irratti mormii dhiyeesse tokko hin jiru. Ganda Shiishaa, caatiifi dhugaatii irraa deemtee odeesuu malee OPDO yaada kana qaba kan jedhe hin jiru. Odeesituu dha.
9.Daniel Kibrastiin kan ofitti qabaa jiru oduu warra Amaaraa irraa isatu naafida. Finqolcha mootummaa Amaarrii yaada turte kan naafide tika biyyaa osoo hin taanee Daniel dha.
10.RIB keessaa amma iyyuu ajajaa 10 hanga Koloneeliitti Tigieetu jira. Irra keessa warra Maqaa Oromoo qabatetu jira. Garuu dadhaboofi warra hojii hin dalagne dha.
11.Makalakayaan Shiftaa ajeesi jennaan jaarsolii ajjeesettee uummata nati iyyisiisaa jirti.
12. Hattuu kaasuu hin dandeenye,FBfi midiyaa irratti nama ijaartee narartti duulchifte. Kaantiibaa tokko kaasuuf gaafan jedhu waan dhalatee ture beektu.
13. Warri hayyuu, Aktivistii ofiin jettu kun biyya bulchuu miti ji’a 3 osoo hin ta’iin guyyaa 87ffaa irratti biyya diigidi.
14. Ani biyya alaa taa’ee hin qabsoofinne, qiixxaa nyaachaa qabsa’e.
15. AO Afaan hojii federalaa akka ta’u kan nadura gaafate hin jiru.
16. Qabsoo ani gageesaa ture kan nadubatutu dhibe. OBNfi OBS anatu ijaare. Yaada ijaarsa OBS akka ani qopheesse Dinquun illee dubachuu dadhabe.”
Abiy Ahmed Ali, Lammaa Magarsaaf Jawar Mohammed seena siyaasa Oromoo keessati namoota iddoo guddaa qabaniidha (phenomenal political actors in Oromo political history).
Haala amma keessaa jiru kanaan jarri kuni sadeen seena siyaasa Oromoo yeroo dhumaaf jijjiiranii Oromoon abbaa biyyaa, abbaa murtoo, abbaa sirnaa, abbaa dhugaa akka ta’u gochuus ni danda’u Oromoon akka sabaati cabee deebi’ee warra kaabaa jalati akku bulu godhuus ni danda’u.
Akkamiin jarri kuni fedhii ummata Oromoo giddu gala godhatanii akka hojjetan, wal irratti odoo hin taane waliin akka hojjetan godhuu dandeenya kan jedhu hojii manaa hunda keenya ta’u qaba. Kana jechuun garuu jara kana gidduu rakkootu jira jechuu ta’u dhiisu danda’a.
Salpho akka namitti Abiy Ahmed jedhamutu eddan dhaladhe argee hinbeeku. “Baalageen ba’aa Damaa hinbeektuu” jedha Oromon yommu makmaku. Typical OPDO. OPDO 2.0 serving Nafxanya or ready to serve Nefxanya.
“Bilginna” Party nuuf uumtee yaa Balaagee? Oromon ‘Bilixiginaa Party” hinjedhinaa, partin Abiy Ahmed ‘BILGINNA PARTII” ti maqan ishii.
Biliginnaa Partii, UJUMMOO ittin Nafxanyaan Dhiiga Ilmannaan Oromoo xuuxuuf diriirfate dha. Bilgina partiin Oromon kaayyoo hinqabuu, kaayyoo qabsaauuf ta’e qabsaahaatii ture hinjiruu jechu ishiti. Kun immoo Ilaalcha nafxanyaa ti. Oromoon bilisummaa isaa goonfacuuf qabsaa’uu ciminaan itti fufuu bira darabee, hamma ilaalchi nafxanummaa Oromiaa fi Ollota ishii keessaa duuguugamtuttu qabsoo itti mudduu qaba. We need to fight all the way in!. Qabsoon hanga dhumaatti ta’uu qabdi.
Maqaa Basaastota Bilxiginnaa kannneen Dhokatanii Ummata Basaasaa Jiran.
Diilalla:-Amboo xiqqoo Jalqabnerraa!!
Adda Bilisummaa Oromoo: Obbo Daawud Ibsaa akkamiin hojiitti deebi’an?
Sochii fi Tarkaanfii WBO -Ajajaa WBO Konyaa Jimmaa
DW International የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ኣባል አቶ ጌታቸው ረዳ ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር የተደረገ ቆይታ፣
Manni Maree Federeeshinii filannoo Tigraay dhaabsisuu danda’aa?
Siyaasa Itoophiyaa: Naannoo Tigraayitti humnoonni nageenyaa agarsiisa waraanaa taasisaan
Nobel Laureates In Crisis Mode!!
Ajaa’iboo Hayiluu Huursii Kaasi! New Oromo Music 2020.
Taarikuu Isheetuu goota biyyaaf duule New Oromo Music 2020